खबर Archives - Chautari Post Online
ताप्लेजुङ अदालतद्वारा १ वर्षमा ४४७ मुद्दा फैसला
वसन्त लिम्बू ताप्लेजुङ/ जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले एक वर्षमा ४ सय ४७ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । यो विगत ४ आर्थिक वर्षयताकै धेरै हो । जिल्ला न्यायाधीश कृपासुर कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ४७ थान मुद्दा फैसला गरेका हुन् । अदालतमा अब ३७ थान मात्रै मुद्दा रहेका छन् । बाँकी रहेकामा पनि ६ महिना नाघेका र १० महिना नपुगेका मुद्दा २ वटा मात्रै छन् । ७० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको अदालतले ९२.४ प्रतिशत फैसला गरेको हो । फैसला भएकामध्ये सबैभन्दा बढी १ सय १० वटा सम्बन्धविच्छेदका रहेको श्रेस्तेदार केदार गौतमले बताए । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय १७ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेका थिए । जसमध्ये १९ वटा पुरुष वादी भएका मुद्दा रहेका छन् । सम्बन्धविच्छेदबाहेक अंश मुद्दाका ५०, लेनदेनका ४४, सरकारी कागज कीर्ते ३९, ज्यान मार्ने उद्योग ३२, करणी ३१, ज्यान १५, लागूऔषध ५, वन ४, जालसाज १३, पुनरा
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र बन्न नसकेको हो । एक वर्षअघिदेखि नै तयार पारिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिमा झन्डै ६ महिनादेखि अड्किँदै आएकाले सो विधेयकले कानुनको रूप लिन नसकेको हो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा २७ वर्षअघि बनेको ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ तथा ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
एक साताअघि परेको अविरल वर्षाले पर्सामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । पहिले डुबानममा नपरेको वीरगञ्ज एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नगर विकास कोष र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लगानीमा निर्माण भएको मझौला सहर तथा सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका कारण दुई वर्षयता डुबानको समस्या भोग्न बाध्य भएको छ । डुबानबाट निकास पाउन निर्माण गरिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि नै डुबानमा वीरगञ्ज सहर पर्न थालेपछि मुख्य बजार क्षेत्रका व्यवसायी नै आक्रोसित भएका छन् । ७२ घण्टा अविरल पानी परेपछि वीरगञ्जको मुख्य बजारक्षेत्र आदर्शनगर डुबानमा परेर त्यहाँका सबै पसल सटरमा पानी पसेर करोडौँको नोक्सानी भएको व्यापारीको गुनासो छ । आयोजनाको गलत डिजाइनका कारण पाँच दिनसम्म परेको वर्षाले वीरगञ्ज सहर डुबानमा परेको भन्दै आयोजनको सर्वत्र आलोचना भएका बेला आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले भने आयोजनाको दोषबाट उम्किन सिर्सिया नदीका कार
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा आएको राहधानी विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले त्यस विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर फेरि सदनमा आएको यो पहिलो विधेयक हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी जारी गर्ने त्यसको प्रयोग लगायत विषयमा विधेयकमा अस्पष्टता देखिएको कारण जनाउँदै जेठ ८ मा प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिएकी थिईन् । कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा समयमै भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइने भएको छ । परीक्षणका रूपमा दैनिक पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगञ्ज ल्याइन थालिएपछि तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा समयमै पेट्रोलियम आउने भएको हो । यो आयोजना ३० महिनामा तयार गर्ने गरी १५ महिना अघि सुरु गरिएको थियो । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले परीक्षणका रूपमा पेट्रोलियम ल्याउन थालिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “हामी साउनभित्रै पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने तयारीमा छौंँ । ” पेट्रोलियम पाइपलाइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । भारतको बरौनीदेखि पटना, पटनादेखि मोतिहारी र मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम आपूर्तिको दैनिक परीक्षण भइरहेको छ । गोइतको भनाइ छ, “अहिले कतिसम्म धमिलो आयो, पानी मिसिएको छ÷छैन, शुद्धता कस्तो छ, यी सबै कुराको परीक्षण भइरहेको छ ।
नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या ६३ हजार २ सय ५९ पुगको छ । सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्दैगएको दाबी गरेतापनि आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को तुलानमा गत वर्ष ५ हजार विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले दिएको तथ्याङकअनुसार गत वर्ष अष्ट्रेलियामा ‘नो अब्जेक्सन’ लिने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । असार मसान्तसम्म अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या ३६ हजार ३ सय २४ रहेको छ । अन्य देशको तुलनामा अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या करिब ७० प्रतिशत बढी रहेको छ । अष्ट्रेलियामा अध्ययनसंँगै रोजगारीको अवसर पाउने भएपछि विद्यार्थीको संख्या बढेको शाखाले जनाएको छ । अष्ट्रेलियामा तुलनात्मक रुपमा सजिलै भिषा पाउने भएपछि त्यहाँ जानेको संख्या बढ्न थालेको शाखा प्रमुख म
मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई माफीसहित स्वदेश फर्कन दिने भएको छ । गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले बिहीबार पुत्राजयस्थित अध्यागमन विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी अगष्ट १ देखि डिसेम्बर अन्त्यसम्मको ५ महिने आममाफी कार्यक्रम घोषाणा गरे । ‘ब्याक फर गुड (बीफोरजी)’ नाम दिइएको आममाफी कार्यक्रमअन्तर्गत गैरकानुनी कामदारले स्वदेश फर्कन ७०० रिंगिट जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यासिनले उक्त कार्यक्रमको उपयोग गर्दै गैरकानुनी आप्रवासी अध्यागमन विभागका कार्यालयमा जरिवाना शुल्क तिरेर स्वदेश र्फन सक्ने बताए । घर फर्कन चाहने गैरकानुनी कामदार सम्बन्धित देशका दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिएर अध्यागमन विभाग कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
इटहरीका ब्यापारीले गरे बिहीबार नै बजार बन्द
इटहरी । बिहीबार इटहरी बजार ठप्प भएको छ । ब्यापारीहरुले शनिबार बजार बन्द गराउने भन्दै निर्वाचन गरे पनि ब्यापारीहरुले बिहीबार नै बजार बन्द गराएर ठप्प बनाएका छन । इटहरीका ब्यापारीहरुले भने बिहीबार नै बजार बन्द गर्नु पर्ने भन्दै बन्द गराएका हुन । इटहरीमा लाग्दै आएको साप्ताहिक हाट बन्द गराउने र नगराउने विषयमा व्यापारीहरूबीच नै मतभेद भएको छ । लामो समयदेखि बिहीबार इटहरी बजार बन्द हुँदै आएको थियो । तर, हार्डवेयर प्लाई तथा सेनेटरी ब्यवसायी सङ्घले भने शनिबार बन्द गराउँदै आएका थिए । असार १४ गते भएको उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा बिहीबार र शनिबार बजार बन्द गराउँने विषयमा मतदान नै भएको थियो । शनिबार बजार बन्द गराउँने पक्षमा धेरै मत खसेको भए पनि बिहीबार बजार बन्द गराउँदै आएका इटहरीका ब्यापारीहरुले भने अटेर गदै बिहीबार नै बजार बन्द गरेका हुन । उद्योग बाािणज्य संघका पूर्व अध्यक्ष टङ्क
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७ नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले छोड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रहरीले लगाएको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै बिहिबार सातै जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमाथि माननीय न्यायाधिश इश्वर खतिवडा, तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको बहसमा पूर्ण इजलासले बन्दीहरुलाई प्रबृत्त धारणा राखी बन्दी बनाइएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायकमा गलैंचा व्यवसाय गरी बस्ने तेजबहादुर मोक्तान, सल्लान जिल्ला बागचौर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा मानविकी संकाय स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अखिल (क्रान्तिकारी) भक्तपुर जिल्ला समिति अध्यक्ष चित्रकमल ओली, रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ५ घर भई भक्तपुर जिल्ला चाँग